Ogaden News Agency (ONA) – Dhibaataynta Shacabka Oromada oo Sare Ukacday.
Dhibaataynta Shacabka Oromada oo Sare Ukacday.
Posted by Dulmane	/ March 31, 2018
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Oromia ee kacdoonadu ay kajiraan ayaa sheegaya in ciidanka Agaziga looyaqaano ee qoomiyada Tigreegu ay samaysatay ay xidh xidheen dad aad ubadan oo qaarkood magac kulahaayeen dhulka Oromada.
Sida xogta aan kuhelayno ciidanka gaarka ah ee Agaziga looyaqaano ayaa baryihii lasoo dhaafay mashquul ku ahaa dhibaataynta shacabka Oromada, gaar ahaan kuwa lagu tuhunsan yahay in aysan ladhacsanayn waxa wadanka kasocda.
Ciidanka akhlaaqda xun ee wayaanaha ayaa lasheegayaa in ay xabsiga dhigeen gudoomiyihii dhinaca amaanka ee magaalada Baabili oo qoomiyada Oromada udhashay Xamze Cabdi, kaas oo sida lasheegayo xidhaygiisa kahor aad loojidhdilay.
Sidoo kale ciidanka wayaanaha ayaa xabsiga udhaadhiciyay gudoomiyihii urur kusheega OPDO ee magaalada Ma’ayso oo lagu magacaabo Muuse Siciid, sidoo kale waxaa magaalada Hibro ee dhulka Oromada lagu xidhay gudoomiyihii magaaladaas oo Axmed Jundi lagu magacaabo.
Sidoo kale ciidanka gumaysiga ayaa lasheegayaa in ay magaalada Asmatafari masaajid kuyaala kala baxeen iimaamkii masaajidka oo lagu magacaabo Sheekh Ibraahim, waxaana lasheegayaa in xidhayga iimaamka masjidka nabada ee magaaladaas ay xiisad xoogan kadhalatay.
Kooxda talada wadanka lawareegtay ee Common Post ga looyaqaano ayaa lasheegayaa in ay sare uqaadeen tacadiyada shacabka Oromada ah ee kudhaqan dhulka ay kacdoonadu kajiraan, waxaana magaalooyinka dadka lagu dhibaateeyay kamid ah Ambo, Walaga, Shashabane, Adama, Jima, Balle iyo magaalooyin kale oo aad ubadan.
Magaalooyinkan ayaa lasheegayaa in laga qaqabtay dad dhalinyaro ah oo arday ubadan iyo aqoonyahano udhashay dhulka Oromia, iyo waliba siyaasiyiin aan ladhacsanayn sida ay wayaanuhu wax umaamulayaan.